Ihlathi lekhristal_. UJohn McClaine uba yinto ehlekisayo (kunye nevesi). | Uncwadi lwangoku
Ndiyibonile kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo kwaye ndiyayithanda. Akukho ngaphezulu okanye ngaphantsi UJohn McClaine, Elinye lamaqhawe am amakhulu. Ihlathi lekristale, Ifilimu yesenzo esidala 1988, elandelayo izakupapashwa 17 ngo-Oktobha kwifomathi ye- udidi ngeAmazon. Kodwa…
... kubonakala ngathi kuphela kwi isiNgesi. Siza kubona ukuba kukho ushicilelo ngeSpanish. Bazi Amaphepha ayi-32 ezithengiswa ngeerandi ezili-17, malunga 14 euro. Isipho sokubhalisela iKrisimesi, nangona ingakhange ijolise ikakhulu kwabancinci, kodwa yeyona indala endlwini.
2 Yintoni eguqukayo
Con Iskripthi Umhlekisi waseMelika, umbhali kunye nomculi Uphondo lweDoogie, iboniswe yi ikhathuni UJJ Harrison, osebenze kwiDisney, Nickelodeon, Peguin Ramdon House okanye Marvel. IHarrison akayekanga ubundlobongela okanye igazi kwimizobo yakhe, ekhangela iindawo ezigcina ngokungagungqiyo i undoqo Kwimovie.
Isicatshulwa sihlengahlengisa esaziwa kakhulu imbongo kwihlabathi le-Anglo-Saxon Ukutyelelwa ngu-Saint Nicholas, Waziwa kakhulu ngendinyana yakhe yokuqala (Kwakubusuku obungaphambi kwekrisimesi), kubangelwa yimbongi yaseMelika UClement clarke moore kwaye yapapashwa ngo 1823. Kodwa ke, nantsi inguqulelo yasimahla ebalisa, kwindinyana yonke into eyenzekileyo kwifilimu.
Kwakubusuku obungaphambi kweKrisimesi, xa endlwini yonke kwakungekho sidalwa sashukunyiswayo, nkqu nempuku. Izitokisi zaxhonywa ngononophelo kwindawo yomlilo, ngethemba lokuba iNgcwele uNicholas izakuba lapho.
Abantwana bachwechwela kamnandi emandlalweni wabo, bephupha iilekese bedanisa kwiintloko zabo; noMama onesikhafu sakhe nam ndinomnqwazi wam, sasilungiselela ukulala ubusika ixesha elide; ngelaxesha kwavuka isiphithiphithi edlelweni apho ndatsiba ebhedini ndisiya kubona ukuba kwenzeka ntoni […].
¿Ngubani ongabonanga Ihlathi lekristale? Ngubani ongalaziyo ipolisa uJohn McClaine ngobuso nomzimba we UBruce Willis oneminyaka engamashumi amathathu ubudala? Ngubani ongabonwanga Los Angeles, kwi Busuku benzolo, emasangweni Nakatomi Plaza? Ngubani ongakhange athande enye yeefayile ze- eyona villains of cinema, the lousy Hans Gruber with the elegance of that magnificent English English who was UAlan Rickman?
Ngubani ongazange onwabe ngayo isiyobisi Ngubani ovalelwa kwindawo yokupaka engaphantsi komhlaba? Okanye nge Ummeli uPowell, iidonati zabo kunye nazo ezinkulu Iingxoxo kunomathotholo noMcClaine kwisithuba sayo? Okanye ngokungakwazi nokungakwazi ukusebenza kweearhente ze FBI? Ngubani ongazange zinqumle iinyawo ukunqumla ukungcola kweglasi emva kogqabhuko olumangalisayo kumgangatho ophezulu?
Kulungile. Okuphantse kubhetele sisipho sonke esinokuzinika sona eMcClaines.
Umthombo: okt 9.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ihlathi lekhristal_. UJohn McClaine uyahlekisa (kunye nevesi).